Walwal laga muujiyay horumarka Soomaaliya - BBC News Somali
Walwal laga muujiyay horumarka Soomaaliya
21 Maajo 2014
Wakiilka xog guud ee UN ee somalia Nicholas Kay ayaa wareysi bbc ay la yeelatay wuxuu wal wal ka muujiyey sida loogu guuleysan karo fulinta qorshihii lagu tala galay,siiba in doorashado ay ka dhacdo somalia 2016.
Nicholas kay ayaa barri khamiista khadka video wuxuu warbixin ku siin doonaa xubnaha golaha ammaanka ee New York.
Inkastoo uu wal wal muujiyey haddana Mr Kay dhinaca kale wuxuu ka hadlay arrimo ku jiray qorshihii hore oo qaddar horumar ah laga gaaray,khaas ahaan siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga somalia,inkastoo buu yiri horumarkaasi aanu gaarsiisneyn heerkii loo baahnaa.
Tifaftiraha BBC Somali Cabdiraxmaan Koronto, oo wareystay wakiilka xoghayaha guud, ayaa marka hore waydiiyey arrimaha hortaagan ee caqabadda ku noqday in xowligii la rabay uu ku socdo qorshihii Soomaaliya loo dejiyey.
Maqal Maxay ka dhigan tahay guusha Erdogan?
Maxay ka dhigan tahay guusha Erdogan?
Maqal Seyladda xoolaha ee Wajeer oo loo xiray sababo la xiriira cudurka Rift Valley Fever
Seyladda xoolaha ee Wajeer oo loo xiray sababo la xiriira cudurka Rift Valley Fever
Maqal Maxay tahay arrinta ku salaysan carruurta laga reebay waalidiintood muhaajiriinta ah ee haraysay Maraykanka?
Maxay tahay arrinta ku salaysan carruurta laga reebay waalidiintood muhaajiriinta ah ee haraysay Maraykanka?
Maqal Maamulka Banaadir oo burburiyay guryo garoon laga dhistay
Maamulka Banaadir oo burburiyay guryo garoon laga dhistay
Maqal Dumarka Hargeysa oo bartay sare u qaadidda dhaqaalaha qoyska
Dumarka Hargeysa oo bartay sare u qaadidda dhaqaalaha qoyska
Maqal Farsamada dumarka kala soo laabteen xeryaha Dhadhaab
Farsamada dumarka kala soo laabteen xeryaha Dhadhaab